Ngathi - Zhejiang Kaibo Valve Co., Ltd.
Zhejiang Kaibo Valve Co., Ltd. indawo yokuhlala kwidolophu edumileyo "yeValve yedolophu yaseChina" -Longwan kwiphondo laseZhejiang.Inkampani yethu ibandakanyeka kuyilo lweemveliso zevalvethi kunye nemveliso iminyaka emininzi kwaye iqokelele amava atyebileyo ebaleni.Sisele simisele igama elihle njengevelufa umenzi kwaye unefuthe elihle kwintengiso yevalufa.
Inkampani yethu ikwenza ngokukuko ukubekwa emgangathweni, ukudityaniswa kunye nolawulo lwenkqubo, inenkqubo yolawulo lomgangatho olusempilweni nolusebenzayo; zonke iimveliso ziveliswa phantsi kwelayisensi yokuvelisa izixhobo ezizodwa, eqinisekisa ukuba into nganye ithembekile ekusebenziseni.
I-Zhejiang Kaibo Valve Co., LTD iimveliso eziphambili zibandakanya i-American kunye ne-Russian standard standard valves, valves gloves, check valves, valves ball kunye nezinye iintlobo ze-valve, sinemigca yemveliso engaphezulu kwe-100 kwaye phantse iimodeli ezahlukeneyo ze-1000. , I-ANSI, imigangatho ye-GOST, ubungakanani ukusuka ku-1/2 "ukuya ku-40" (DN15 ukuya kwi-DN1000 mm), ukuvavanywa koxinzelelo ukusuka kwi-150lb ukuya ku-2500lb (1.0Mpa ukuya ku-42.0Mpa), ukusebenza kweqondo lobushushu ukusuka ku-196 ukuya ku-900 ℃. intsimbi, ingxubevange yentsimbi, intsimbi engatyiwa, i-ultra-low carbon steel stainless, i-alloy 20 kunye nezinye izinto kubandakanya iintlobo ezizodwa zentsimbi kunye ne-alloy eyenziwe ngokweemfuno ezithile zabathengi.Zonke iimveliso ziyahlangabezana nemigangatho eyimfuneko yomzi mveliso, iivalves ziyacetyiswa ukuba zisetyenziswe kwioyile. ishishini, ishishini lwekhemikhali, ishishini lokwakha, ishishini lokunyibilikisa isinyithi, ishishini potification yokusingqongileyo, ishishini lamandla ombane, ishishini lenqwelomoya, ishishini zaselwandle njl Ukubonelela abathengi bethu ngokona kulungileyo iZhejiang Kaibo Valve Co., LTD izise ukufumana iqela labasebenzi ababalaseleyo kwezentengiso kunye noochwephesha abaqeqeshiweyo kunye neenjineli.
I-misson yenkampani yethu kukubonelela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu kunye neyodidi lokuqala kuluhlu olubanzi lwabathengi.Siyabamkela ngokunyanisekileyo bonke abathengi abadala nabatsha ukuba batyelele inkampani yethu, ukuseka intsebenziswano eluncedo ngenjongo yokuxhamla kunye nokwenza ikamva eliqaqambileyo kunye.
Isatifikethi sobhaliso lwentengiso
Isiqinisekiso sezixhobo ezizodwa (1)
Isiqinisekiso sezixhobo ezizodwa (2)
Isiqinisekiso sezixhobo ezizodwa (3)
Isiqinisekiso sezixhobo ezizodwa (4)